Kabaha dayrta ee haweenka
Ugu dambeyntii, waxaa la joogaa wakhtigii lagu abuuri lahaa sawirrada dayrta ee dayrta, tanina waa kabo sidoo kale waa inay ahaato mid haboon. Waxaa suurtagal ah in doorashadan ugu waxtarka badan ee muddadani ay tahay kabaha dayrta ee haweenka, oo labadooduba diirran yihiin lugaha waxayna fiiriyaan xarrago. Marka la barbardhigo kabaha caadiga ah, kabaha nuska ah waxay ku haboon yihiin gabdhaha leh weylaha buuxa, maaddaama bootlegka badankood uu yahay mid bilaash ah. Waad xiran kartaa jeanska, iyo surwuxyada dhaadheer, iyo xitaa dharka iyo dharka, haddii aad doorato habka saxda ah ee kabaha .
Isbedelada xilliga dayrta
Xilliga dayrta dheddig-haweenka dhirbaaxa ama korka dhaqdhaqaaqa - waa kambiyuutarka ugu caansan xilliyada fasaxa ah. Ugu horeyn, moodooyinka noocan oo kale ah ayaa si sahlan loogu daraa wax kasta oo ka baxsan, oo ku haboon nooc kasta. Marka labaad, doorashadu waa mid ballaadhan oo ah in labadoodii ugu fiicneyd ay naftooda u qaadan karaan gabadh da'yar ah iyo gabadh da 'wayn.
Noocyada ugu caansan waa kabaha dayrta mugdiga ah ee cirifka-post, sawirada kuwaas oo laga arki karo joornaalada oo dhan. Cirbaddani waxay u ogolaataa in gabadhu ay dareemaan kalsooni iyo waqti isku mid ah dumar. Dhererka cirifku wuxuu noqon karaa mid kasta, hase yeeshee xirmooyinka maalinlaha ah waxay u fiicantahay in la joojiyo ikhtiyaarka ku yaal qeybta nuska ah, kaas oo dhererka cirridku uusan ka badnayn todobo mitir. Sida maaddooyinka, maqaarku waa hogaamiyaha aan waxba galabsan. Maqaalkani wuxuu muddo dheer ku cadeeyay inuu yahay waxqabadka iyo daryeelka aan hoos u dhicin. Intaa waxaa dheer, waxaa suurtagal ah in la doorto moodooyinka ka yimaada maqaar, dhejis ama dhogor madow. Haddii cimilada qorraxda qorraxdu ka baxdo daaqada, sawirka waxaa lagu dhejin karaa suede-kabaha nuska ah, oo had iyo jeer u muuqda sharaf iyo sharaf leh. Xaaladdan oo kale, muhiim maaha inaad xaddiddo midabada "dayrta" ee caadiga ah. Naqshadayaashu waxay bixiyaan si ay u riixaan kabaha madow iyo buniga ee khadka fog, oo waxay doorbidaan qaababka dhalaalaya oo awood u leh inay kiciyaan dabeecadooda labadiinaba adiga iyo kuwa kaleba. Kabaha kala duwan ayaa ka buuxa buluug, caanjiyo caan ah, midab casaan iyo casaan leh oo casaan leh - tani waa isbeddelka xilliga dayrta. Marka aad iibsanayso kabaha dayrta, fiiro gaar ah u yeelo walxaha qurxinta. Moodada casriga ah ee la jiidanayo, jajabyada birta ah, oo sameeya qalab ku takhasustay, halkii ay ka shaqayn lahaayeen farsamada, iyo sidoo kale noocyada kala duwan ee rivets, applices, sawiro. Ka eeg kabo fiican, qurxin leh dhogor.
Tayada, quruxda dayrta ee quruxda badani waxay sameyn doontaa dayrta dayrta!
Coat with travery
Dharka T-shirt - isbeddel mooddo sanadkan
Ku soo iibsashada Talyaaniga
U xoq kanji
Suufiyada hawada ee haweenka kulul
Dhaliyaha dhogorta leh
Qaboojiyeyaasha Qaboobaha Jahawareerka
Kabaha isboortiga ee jiilaalka
Dharka xagaaga ayaa dharbaaxaya
Kaba saar kabaha sanduuqa
Koboca iyo xuduudaha kale ee Chris Hemsworth
Soodhada saafiga ah ee labaad
Melissa McCarthy oo lumay miisaanka!
Dumarka oo daawanaya 2016
Kufsiyada ku jirta digsiga qaboojiyaha leh
Sheilin Woodley wuxuu la shaqeynayaa kooxda Fijian rugby-ga
Sidee loo kariyaa digirta barafaysan?
Qodobbo loogu talagalay qaabeyn waji ah
30 sababood oo loo tixgelinayo eyda loo yaqaan 'Stottweilers dogs' oo aan loo abuurin jacayl
Kobcinta basasha on baali ah ee lagu koriyo ah ee xilliga qaboobaha
Muxuu bisadaa qaniinyaa marka aad kaashato?
Cunto-shubka carruurta ee la isku qurxiyo ee xagaaga
Khachapuri leh jiis
Tabeelku wuxuu la taagan yahay gacmahaaga
Island of Manoel
Barkimo casri ah ee dhalaanka cusub
Cabbitaanka tufaaxa ee Viennese